Soo Iibso Slides -ka Dumarka ee Hufan ee Hoosta ku Jilicsan ee Rakaabka ah - Dhoofinta Bilaashka ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Raaxo Hoos -u -dhejis ah oo Dheecaan Dumar ah oo Hufan
$ 22.99 qiimaha joogtada ah $ 33.99
Tirada kabaha 41 39 40 38 37
Dahab / 41 Dahab / 39 Dahab / 40 Qalin / 38 Qalin / 39 Black / 41 Qalin / 37 Dahab / 37 Dahab / 38 Qalin / 40 Qalin / 41 Black / 39 Black / 40 Black / 37 Black / 38
Raaxo Hoos -u -dhejis ah oo Dheecaan ah oo Dheddig ah - Dahab / 41 gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Maqaarka kore: Dharka Dhadhaminta
Qalabka Dahaarka: Waxba
Cabbirka 7 = 37 ku habboon dhererka cagaha waa 23.5cm.
Cabbirka 8 = 38 ku habboon dhererka cagaha waa 24cm.
Cabbirka 9 = 39 ku habboon dhererka cagaha waa 24.5cm.
Cabbirka 10 = 40 ku habboon dhererka cagaha waa 25cm.
Cabbirka 11 = 41 oo ku habboon dhererka cagtu waa 25.5cm.
Xusuusin: Fadlan cabbir dhererka cagahaaga oo si taxaddar leh u akhri miiska cabbirka. Dhererka cagtu ma aha dherer qotodheer, sidoo kale ma aha dhererka kabaha gudaha. Haddii cagahaagu buuran yahay ama ballaaran yahay, waxaan kuu soo jeedinaynaa inaad doorato hal cabbir oo weyn. Caadi ahaan, dhererka gudaha = dhererka cagta +0.5 ~ 1.5cm
satiffite de mon achat
Kaamil ah, qaali ah oo sax ah baaxad ahaan. Dhoofinta degdegga ah ee Jasiiradaha Canary
Bixinta degdegga ah, tayo wanaagsan, mahadsanid